Ireo ankoatra ny katolika dia misoratra amin’ny EKAR akaiky azy», hoy Andriamparany Ramanantsitohaina, Solontenan’ny fitondram-panjakana misahana ny fikarakarana ny fandraisana ny Fiketrahana Masina. Samy misoratra anarana any amin’ny paroasiny avokoa ny katolika. Raha ny fampitam-baovao azo hatrany, manodidina ny 800.000 ny mpino andrasana amin’io fotoam-bavaka io. Ny diosezy 22 manerana an’i Madagasikara no manentana sy mandamina ny lisitra sy ny fitaterana ao aminy. Anjaran’ny Diosezin’Antananarivo Renivohitra ny fandraisana ireo vahiny na any avy any ivelany na ny kristianina manerana ny Nosy. Efa misy ny tatirakitra ho fanomanana ny fitsidihina apostolika. Nijery ny fotodrafitrasa ny filoham-pirenena tamin’ny herinandro, noho ny maha fandraisana ny filoham-pirenen’ny Vatican ny Papa fa ny Fivondronamben’ny Eveka no miantoka ny fandaniana rehetra.